Usuku lokuzalwa ozithandayo indodana noma indodakazi bonke abazali kuyiholide hhayi kuphela, kodwa futhi ngosuku wemfanelo kakhulu, ngoba ngakho bafuna ukujabulisa ingane. Konke kumele uphelele: isipho, umhlobiso egumbini futhi, yebo, imenyu. Nokho, sinqume ukuthi yikuphi okufanele ukupheka lokuzalwa yezingane, abazali ibhekene nezinkinga eziningi, ngoba izingane banganikeza, akuyona yonke imikhiqizo. Futhi-ke, ukudla kufanele kube enhle kakhulu. Kulesi sihloko sizohlola izibonelo ezimbalwa zalokho ukupheka party yezingane futhi indlela ukuhlobisa izitsha indlela yokuqala.
imenyu Imithetho Wezingane
Okokuqala, kufanele uqaphele imithetho embalwa ezihlobene ukudla iholide zezingane. Okokuqala, etafuleni akufanele kube kukhona okunamafutha, okunosawoti futhi okubabayo. Ungadla nge garlic, pepper kanye inala imayonnaise namasoseji uthenge is kungcono ishiyelwe abadala. Izithelo, okubangela ukusabela iguliswa, kungcono ukubeka eceleni, like inhlanzi nge amathambo amancane, amagilebhisi ne amajikijolo nge imbewu, izithelo nge uqweqwe kanzima. Lokhu kungaba yingozi empilweni izivakashi abasebasha. Ngaphezu kwalokho, sikhetha lokho ukupheka lokuzalwa zezingane, zama ukugwema ukudla "eyingozi izingubo" okungukuthi juice elikhanyayo, berry kophudingi beetroot salads. ukudla okunjalo kufanele ukondla izingane phezu kweminyaka eyisikhombisa, eye kancane kancane abhekane ngokuphumelelayo nesitha sakhe imfoloko nokhezo.
imenyu yezingane kubaluleke kakhulu ukuthi zonke izitsha akuzona kuphela esiphundu, kodwa kuyasizuzisa impilo. Noma okungenani hhayi yingozi ezinganeni. Futhi-ke, itafula yezingane kumele bacebe kakhulu futhi emuhle. Izingane kufanele sijabulise hhayi kuphela amaswidi, kodwa futhi imigexo yasekuqaleni salads. Nazi imibono ambalwa yini ukupheka lokuzalwa yezingane.
Uma sizibuza ukuthi ukupheka lokuzalwa zezingane, lokhu isaladi kuyoba isibusiso sangempela. Advance kufanele ofakwe for ukuvuvukala 200 amagremu asithena. beet ababili kanye izaqathe ezintathu abilisiwe kuze kuphekwe, selehlile futhi wagcoba on a grater emihle. Futhi, udinga grate 100g ushizi. Ngemva kwalokho asithena ofakwe uthathe yizicucu amancane. amagremu 100 walnuts oqoshiwe. Salad aliveza izingqimba alandelayo: izaqathe kanye asithena, ushizi, garlic, walnuts ne beet. ungqimba ngayinye imayonnaise spreadable. Ukwakha ubuso futhi izindawo ladybug asithena esetshenziswa. Ngomqondo onabile, isaladi zezingane kungenziwa ngokuthi cishe kunoma iyiphi. Into ebaluleke kakhulu - ukuhlobisa it ngangokunokwenzeka yasekuqaleni.
Okokuqala udinga Bilisa izaqathe, kuphole futhi bahlanza ngokucophelela. Inkukhu umucu nge oqoshiwe futhi ethosiwe kuze kuphekwe. Izaqathe kanye namaqanda abilisiwe wagcoba on a grater emihle. amakhowe ethosiwe kanye anyanisi oqoshiwe. On the phansi endishini ungqimba wokuqala babeka inyama yenkukhu ethosiwe, khona-ke izaqathe, imayonnaise ungqimba, amakhowe fake lisikiwe, ngesinye isendlalelo imayonnaise, anyanisi, amaqanda wagcoba ungqimba, ungqimba imayonnaise. Phezulu isaladi aliveza amabele, umbuthano efomini sunflower amacembe, zibekwe chips zingcono Fry ngokwayo, usebenzisa amazambane thinly lisikiwe.
Ukuheha ingane ukuba izitsha ashisayo kuyoba nzima nakakhulu. Lapho ekhetha lokho ukupheka lokuzalwa yezingane, kufanele inake kuzuze izitsha kanye nokubukeka kwabo. Ngokwesibonelo, isidlo sokuqala iyoba izingulube, wenza ama-squid eyayigcwele noma amazambane. Okunhlobonhlobo ithebula zezingane umhlobiso imifino, amaqanda kanye nezithelo. Ngokwesibonelo, i-umhlobiso evamile side dish ungasebenzisa ladybugs kusuka utamatisi ezincane cherry ne flecks seminqumo. Sithemba ukuthi manje unombono yini ukupheka ngosuku zezingane ekhaya lokuzalwa.